Semalt: Inona no The Best Web Scrapers Online?
Izany dia ao anaty baoritra finday ho an'ny fahazoana mora. Raha ny marina, ny fitaovana fandinganana tranonkala dia lasa nalaza tamin'ny fotoana satria mpandroba ny tranonkala dia nanamboatra sy nanatsotra ny fomba fitsangatsanganana manontolo mba hahatonga ireo loharanom-baovao amin'ny alàlan'ny Internet ho an'ireo Internet. Ny fitaovana mpitsikilo amin'ny aterineto sasany dia mamela ny mpampiasa hanisy endrik'izy ireo na mikaroka ny tranokalany na bilaoginy amin'ny fomba metimety sy mahomby tsy mila code. Izy ireo koa dia manova ny angona amin'ny endrika samihafa ary mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpampiasa. Eto izahay dia niresaka momba ny fitaovam-pamakin-tsakafo vitsivitsy ho an'ny tranonkala sy bolongana.
Cyotek WebCopy dia programa maimaim-poana sy maimaim-poana izay ahafahanao manapika tranokala iray ao anaty sarotra ahafahanao mamaky azy tsy misy Internet connection. Ity programa ity dia manala ny tranonkala voatondro mialoha ny famoahana ny angona na ny votoatiny ao amin'ny rakitra sarotra. Izy io koa dia manapariaka rohy amin'ireo loharano toy ny sary, tranonkala, ary votoaty ao an-toerana, ary manasongadina ampahany amin'io tranokala io ihany izay tsy midika na inona na inona amin'ireo milina fikarohana.
HTTrack dia programa maimaim-poana izay manolotra sehatra maro sy safidy azo atao amin'ny famoahana tranokala iray manontolo amin'ny Internet ho an'ny solosaina na fitaovana finday..Ny sasany amin'ireo dikan-teny malaza dia Windows, Sun Solaris, Unix, ary Linux. Ity programa ity dia ahafahana mamindra ny tranokalanao mihoatra ny indray mandeha ary mahatonga ny fitsaboana amin'ny Internet ho mora kokoa sy haingana kokoa. Azonao atao koa ny miditra amin'ny sary, ny rakitra, ny code HTML, ny torolàlana, ary ny manapaka ny download anytime.
Octoparse dia mpilalao mafonja mahery sy maimaim-poana izay ampiasaina amin'ny famongorana ireo karazan-danja rehetra ilainao avy amin'ny tranokalanao. Ity fandaharan'asa ity dia mampiasa safidy roa hanasongadina ny tranonkalanao amin'ny fomba tsara kokoa ary manana tanjona maro azo alaina avy amin'ny. Ireo fomba mahazatra roa ireo dia Modely Advanced and Wizard Mode, izay tsara ho an'ny mpandrindra ny fampiasana amin'ny Octoparse amin'ny fotoana tsy misy. Azonao atao ny mandefa ny tranokalanao mandritra ny segondra amin'ny fampiasana fitaovana feno. Plus, azonao atao ny manavotra ireo tranokala amin'ny endrika samihafa tsara, toy ny Excel, HTML, ary ny lahatsoratra.
Ny findleft dia programa mora ampiasaina izay manampy amin'ny famoahana bilaogy iray na tranonkala avy hatrany. Hamoaka ny tranokao manontolo izy ary manana safidy maromaro ahazoana tombony. Azonao atao ihany koa ny miditra ao amin'ny URL ary misafidy ireo rakitra azonao andefasana download ao amin'ny rafitry ny ordinateranao. Ity fandaharam-potoana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra satria avy amin'ny fiteny 15 samihafa, manana fanohanana 24/7, ary mahatonga ny fitsidihanao ho mahafinaritra sy miavaka.
5. Ny mpangalatra
Ny fandevenana dia famoronana Chrome malaza izay manam-pahaizana manokana momba ny angon-drakitra fa manampy amin'ny fanaovana fikarohana an-tserasera. Manondrana ny angon-drakitrao ao amin'ny Spreadsheets Google izy io fa tsy ny solosainao manokana, mamonjy fotoana be Source .